China Electric angled simbi shongwe fekitari uye vagadziri | Qiangli
Electric angled simbi shongwe
Electric angle simbi shongwe Angle simbi shongwe iplate yekoramu ine downcomer. Iyo nzvimbo inobvongodza inoumbwa nesimbi yesimbi yakaenzana neumwe neumwe, uye gadziriro yekurongedzwa kwekona simbi inoenderana nekutungamira kwekuyerera kwemvura. Iyo yakapinza unopinza yeiyo angle simbi iri muchikamu chezasi, uye chikamu chemuchinjikwa chiri muchimiro che "V". Iko kune imwe gidhi giya pakati pemaviri akapindirana nemakona emakona. Iye anodonha akafanana neyakajairika tireyi. Mvura iri kumusoro pl ...
Angle simbi shongwe iplate yekoramu ine downcomer. Iyo nzvimbo inobvongodza inoumbwa nesimbi yesimbi yakaenzana neumwe neumwe, uye gadziriro yekurongedzwa kwekona simbi inoenderana nekutungamira kwekuyerera kwemvura. Iwo unopinza mupendero wekona simbi iri muchikamu chezasi, uye chikamu chemuchinjikwa chiri muchimiro che "V". Iko kune imwe gidhi giya pakati pemaviri akapindirana nemakona emakona. Iye anodonha akafanana neyakajairika tireyi. Mvura iri mundiro yekumusoro inoyerera ichipinda mu "V" angle simbi kuburikidza neanodonha, nepo gasi richitutira pamwe neaya mvura painokwira kuburikidza neiyo grid gap, uye iyo gasi-yemvura inoyerera nyika pane tereyi yakafanana neiya pane iyo nesefa. ndiro. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kudzvanywa kudonhedza kwekona simbi tireyi idiki, iyo gasi yekutsinhana kugona yakakura, iyo tireyi kugona kwakanaka, chimiro chiri nyore, kugadzirisa uye kugadzira kuri nyore, uye kuomarara kwakanaka. Nekudaro, iko kushanda kweiyo nesefa ndiro shongwe haina kunaka seyeyeyeye ndiro yeshongwe kana kurapa kugona kuri kushoma. Iyo kona simbi simbi inowanzo shandiswa mumunda, uye iyo simbi pombi danda uye simbi pombi yakatetepa base base shongwe ndeye inowanzo shandiswa mudhorobha nekuti iyo nzvimbo yepasi idiki pane kona yesimbi yesimbi.
Electric angle simbi yeshongwe mhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe yakachengeteka daro pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutepfenyura.
Pashure: Electric angled simbi shongwe
Zvadaro: Electric angled simbi shongwe
Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe
Magetsi Angle Simbi Shongwe
Magetsi Angle Simbi Towers
Electric angle simbi shongwe Magetsi kona yesimbi shongwe imhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe nhanho yakachengeteka pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Mumakore achangopfuura, nekukurumidza kukura kwehupfumi hwenyika, iyo indasitiri yemagetsi yakawedzera nekukurumidza, izvo zvakasimudzira kukurumidza kusimudzira kwekutepfenyura mutsetse shongwe indasitiri. Zvinoenderana nehuwandu, iyo yekutengesa mari yekufambisa yekuparadzira tambo indasitiri mu ...
Electric angle simbi shongwe Magetsi kona yesimbi shongwe imhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe nhanho yakachengeteka pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Muma1980s, nyika zhinji pasi rose dzakatanga kuisa mapaipi esimbi pombi kune iyo dhizaini painogadzira UHV mitsara yekufambisa. Simbi chubhu shongwe nemapombi esimbi sezvo chinhu chikuru chakaonekwa. MuJapan, simbi chubhu shongwe dzinenge dzinoda kushandiswa mu1000kV U ...
Electric angle simbi yesimbi Nekuvandudzika kwenguva, shongwe dzemagetsi dzinogona kuiswa muzvikamu zvinoenderana nezvinhu zvekuvaka, mhando dzemhando uye mashandisiro emabasa. Zvinoenderana nezvigadzirwa zvakasiyana, mashandisiro avo akasiyanawo. Ngatitsanangurei muchidimbu kupatsanura kwavo uye kushandiswa kukuru: 1. Zvinoenderana nezvinhu zvekuvaka, inogona kuve yakakamurwa kuita huni chimiro, simbi mamiriro, aruminiyamu chiwanikwa chimiro uye yakasimbiswa kongiri dhizaini shongwe. Nekuda kweayo ...
Electric angle simbi shongwe Magetsi kona yesimbi shongwe imhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe nhanho yakachengeteka pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Nekuenderera mberi kukura kwesimba reChina kudiwa kwesimba, panguva imwe chete, nekuda kwekushomeka kwezviwanikwa zvepasi uye nekuvandudzwa kwenzvimbo dzekuchengetedza, matambudziko esarudzo yemigwagwa uye kuputswa kwezvivakwa pamutsetse zvava ...
Magetsi Angle Simbi Shongwe, Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe, Tube Simbi Sisitimu, Prefab Simbi Zvivakwa, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare, Magetsi Angle Simbi Towers,